Fanafihan-jiolahy :: Enin-dahy nitety tanàna telo teny Ambohidratrimo • AoRaha
Fanafihan-jiolahy Enin-dahy nitety tanàna telo teny Ambohidratrimo
Lasibatry ny asan-jiolahy, nandritra ny alina iray, ny trano vitsivitsy tamina tanàna telo teny amin’ny distrikan’ Ambohidratrimo, tamin’ny herinandro lasa teo. Tsy naha­zoan’ireo olon-dratsy na inona na inona ny trano sasany. Voaroba kosa ny vola sy ny entana tao amina trano roa. Lehilahy enina nitondra zava-maranitra no nanatante­raka ny asa ratsy. Tsy nisy tratra izy ireo na dia efa nifanen­jehan’ny mpitandro ny fila­minana aza. Mitohy ny fikaro­hana azy ireo.
Trano iray any amin’ny tanàna manakaiky an’Ivato no lasibatra voalohany, tamin’ny alin’ny alarobia nifoha alakamisy 31 oktobra lasa teo. Tsikaritry ny tompon-trano ny fahatongavan’ireo mpanafika ka nantsoiny haingana ny zandary. Tonga ara-potoana iretsy farany. Nirifatra nitsoaka kosa izy enin-dahy.
Niditra tao amin’ny tanànan’Anjomakely, avy eo, ireo jiolahy. Tsy nahavita na inona na inona tao ihany koa izy ireo. Tonga tany amin’ny kaominin’Ambatolampy Tsimahafotsy ireo jiolahy enina. Nampihorohoroin’iretsy farany ny olona tao amina trano roa sady nangalarana vola sy finday ary karazan’entana marobe.
Fifampitifiran’ny zandary sy dahalo :: Nijininika ny rà, tsy nisy hita ireo maratra na maty